Dry eye syndrome, zviratidzo uye kurapwa | Bezzia
Toñy Torres | 14/07/2021 23:55 | Matipi ehutano
Dry eye syndrome chirwere chinobata vanhu vazhinji, ivo vasingazvizive. Iri dambudziko remaziso rinowanzoitika kuvakadzi, kunyanya kune avo vanopfuura makore makumi mana nemashanu ekuberekwa, kunyangwe zvichigona kuitika chero padanho rehupenyu.
Ichi chirwere chakabatana nekuchinja kwehomoni, kunyanya mumadzimai ari muchikamu chekumira kwemwedzi. Kunyangwe paine zvimwe zvinhu zvinogona kukonzera kuoma ziso, senge yakashata mhando yemisodzi inogadzirwa nemuviri pachawo. Iwe unoda kuziva rumwe ruzivo nezve dambudziko iri? Isu tichakuudza zvese pazasi.
1 Chii chinonzi dry eye syndrome?
1.1 Dry ziso zviratidzo
2 Kurapa kweakaoma ziso chirwere
Chii chinonzi dry eye syndrome?
Iyo inowanzozivikanwa seye rakaoma ziso uye mune yakawanda yakawanda kesi iri dambudziko rinobata vakadzi. Hormonal shanduko inogadzirwa muhupenyu hwese ndiyo honzeri huru yeiyi shanduko mumisodzi, iyo inova isina kukwana. Munguva yepamuviri, shanduko dzakakosha kwazvo dzinoitika, kunyangwe hosha huru yemahormone uye iyo inowanzo kukonzera yakaoma ziso chirwere kuguma kwemwedzi.
Kunyangwe pakutanga zvingaratidzika senge diki mamiriro, ziso rakaoma rinogona kukonzera kusagadzikana kukuru, kunyange kukutungamira kuti uende kune ve emergency mabasa. Kusaziva kwekuongororwa ndicho chikonzero chikuru, nekuti kuoma kweziso kurwadziwa kunogona kukonzera nyonganiso uye kunetseka kana chikonzero chacho chisinga zivikanwe. Saka, kuziva zviratidzo kunogona kukubatsira kugadzirisa dambudziko iri zvisati zvanyanyisa.
Dry ziso zviratidzo
Chiratidzo chikuru cheziso rakaoma chinoratidzwa nezita rayo pacharo, anogumbura maziso akaoma. Asi pamusoro peizvi, zvimwe zviratidzo zvinogona kuoneka senge zvinotevera:
Itching: Kurira kana kuchenesa kunzwa muziso reziso.
Kunzwa kwe maziso anopisa.
Zvakaoma kuchengeta ziso rakavhurika.
Kunzwa kwakanyanya sokunge kuti wakabatwa muziso rako, kunge jecha parinopinda mumugwagwa nekuda kwemhepo.
Kuona kwakashata, kunetseka kuverenga, kutyaira kana kuona zvakajairika.
Kuziva muchiedza chakawandisa.
Kuzvimba, kurwadziwa uye kunzwa kwekuremerwa mumaziso.
Kubvarura: Pasina misodzi, muviri unoburitsa kukwirisa senzira yekuzvidzivirira kubva padambudziko iri.
Mukuwedzera kune shanduko yehormone, yakaoma ziso chirwere chinogona kukonzerwa nezvimwe zvikonzero sekushomeka kweMeibomian Glands. Kana izvi zvikaitika, iyo firimu inovhara musodzi wedenga inobvaruka uye inoisiya ichionekwa kumhepo, kusvibiswa uye vamiririri vekunze. Chii chinoita kuti misodzi iome uye misodzi haina kukwana kuchengetedza ziso neine hunyoro hunodiwa.
Ichi chirwere zvinogona kuitika nekuda kwezvikonzero zvakawanda uye zvakasiyana, izvi ndezvimwe:
Matambudziko eganda Chemhondoro rosacea.
Kunwa kwemimwe mishonga yakadai se mishonga inodzvinyirira, antihistamines uye kunyange mishonga yekudzivirira.
Kuvhiya kugadzirisa matambudziko ekuona iyo inogona zvakare kushandura uye kuwedzera kunzwisisika kwekona.
Kupfeka lenzi dzakanyanya, kurara navo pa kana kusava nechengeto yakakodzera yekushandisa kwavo kwakakodzera, senge kuichenesa musaline solution.
Kupedza nguva yakawanda pamberi pekombuta kana chero chimwe chigadzirwa chemagetsi chinoburitsa kupisa.
Iko kushandiswa kwekudziya uye mhepo kutonhodza mumba, pamwe nemhepo kana kushomeka kwehunyoro panze.
Kusvibisa iri zvakare chikonzero uye njodzi chinhu kune yakaoma maziso eziso.
Kurapa kweakaoma ziso chirwere
Muzviitiko zvakawandisa, kurapwa kunofanirwa kufungidzirwa sechinhu chakareba-uye chakatsiga. Kazhinji kacho ndiko kushandiswa kwemisodzi yekugadzira kuchengetedza unyoro. Iyo isaline solution isina zvinodzivirira zvinofarira mwando weziso. Aya madonhwe anobatsira kubvisa kusvibiswa, guruva, uye zvekunze zvinhu zvinokonzeresa kutsamwa uye ziso rakaoma.
Yenyaya dzakakomba nyaya, nyanzvi ingakurudzira kumwe kurapa kunoenderana nekorticosteroids, hyaluronic acid uye mimwe mishonga. Kunyangwe mune izvi zviitiko, kurapwa kunofanirwa kutarisirwa nguva dzese nachiremba wepamoyo sezvo iyi iri mishonga inotakura mhedzisiro. Kana iwe ukaona maziso ako achisvava uye iwe ukacherekedza chero cheizvo zvataurwa pamusoro apa, ita musangano neako ophthalmologist kuti vakwanise kuita ongororo uye kuongororwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Matipi ehutano » Dry eye syndrome, zviratidzo uye kurapwa
Tricks kubvisa yero mavara kubva kumateti
Shangu dzeDoly, dzakasimba uye dzakagadzirwa kuSpain